Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Cuba » Njem Cuba ọhụrụ: Enweghị kwarantaini, enweghị ule
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa Cuba • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
by Mario Masciullo - Pụrụ iche na eTN
dere Mario Masciullo - Pụrụ iche na eTN
Cuba gbagoro n'ihu ịmalitegharị njem nlegharị anya na iweghachi ọrụ na-abata na-eche mmeghe nke gọọmentị etiti na Nọvemba 15.
Gọọmentị Cuba buliri ọrụ iche iche maka ndị njem mba ofesi malite na Nọvemba 7.
Nke a kwadoro nke a site n'aka Minista njem nlegharị anya Juan Carlos García taa n'oge mkparịta ụka ndị nta akụkọ na Havana na nkwadebe nke ngalaba maka ịmaliteghachi ọrụ gọọmentị.
“Mmepegharị” nke ndị njem nlegharị anya na-anabata ọganihu nke ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19 na mba ahụ.
Onye Minista ahụ gosikwara na a ga-ebulikwa ihe a chọrọ iji nyefee ule PCR na-adịghị mma maka ndị na-abata na ọdụ ụgbọ elu nke agwaetiti ahụ site na ụbọchị 7, n'agbanyeghị na ha ga-egosipụta na a na-enye ha ọgwụ mgbochi ọ bụla nke WHO nyere ikike.
Ụmụaka na-erubeghị afọ 12 agaghị eweta ule PCR ọ bụla ma ọ bụ atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa mgbe ha rutere na mba ahụ. Gọọmenti ahụ, onye minista ahụ kwuru, ka ga-anọgide na-ahụ maka ọrịa na-efe efe, yana iji mmachi nke masks na njedebe na mba ndị ọzọ.
Cuba ụgbọ elu azụmahịa na chata kwụsịtụrụ n'April 2020. N'October nke otu afọ ahụ, o meghere ọdụ ụgbọ elu ya, ma jiri ntakịrị mbelata ụgbọ elu si United States, Mexico, Panama, Bahamas, Haiti, Dominican Republic, na Colombia.
Banyere njem si Ịtali, Cuba enwetala ọkụ ndụ ndụ site na Farnesina, Italian Ministry of Foreign Affairs, na ndepụta "E", nke gụnyere mba ndị mmadụ nwere ike ịga njem naanị n'ihi ọrụ na ngwa ngwa nke onwe ma ọ bụghị maka njem nlegharị anya. . Iwu nke butere nhazi ọkwa ahụ kwụsịrị na October 25, ụbọchị ọnọdụ nke mba dị iche iche nke ụwa nwere ike ịgbanwe maka ozi mba ọzọ.
Ọnụọgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa megide COVID-19 na Cuba A na-atụ anya iru ihe karịrị 90% nke ndị bi na Nọvemba.
Tupu ọrịa a na-efe efe, njem nlegharị anya bụ isi mmalite nke abụọ Cuba na-enweta ego mgbanwe ego mba ofesi wee nye ihe dị ka 10% nke nnukwu ụlọ (GDP).
Mario Masciullo - Pụrụ iche na eTN